Obere Ntanye Zoo Ọkụ Ọkụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Obere Ntanye Zoo Ọkụ Ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Obere Ntanye Zoo Ọkụ Ọkụ)
Obere Ntanye Zoo Ibu akwa
Mgbe ị na-eji Zoo maka n'ime nri ma ọ bụ na-eme ka okpokoro okpokoro okpokoro dị ọkụ maka mgbochi, ọ dị ezigbo mkpa ka a ghara itinye ya na ala nke variọn ma ọ bụ okpokoro mgbochi. E kwesịrị ịtụkwasị ihe dị na mbadamba mgbidi nke a na-edozi ma ọ bụ okpokoro mbadamba ka mbe ghara ịnọdụ ala Nkọwapụta Ngwaahịa Isi...
Obere Waistcoat dị ọkụ nke infrared
Obere Waistcoat dị ọkụ nke infrared Nkọwapụta ngwaahịa Nye gị ọkụ na oyi oyi. Enwere ike iji maka ime ụlọ na n'èzí. Ihe ngwọta dị mma maka oyi na-eme ihe omume ime ụlọ. Ihe ọkụ ọkụ dị elu -far infrared ihe nkiri kpo oku. Ihe nkiri a kpo oku na- emetụta ezigbo radiation infrared dị ka anyanwụ na-eme, gbasaa arịa...
Obere ihe ọkụkụ maka ihe ndị na-akpụ akpụ
Obere Okpokoro Ọkụ Na-eme ka ihe ọkụkụ gị na-eme ka ọ dị ọkụ site na ịpị mkpụrụ na ebe obibi ha. Igwe ọkụ ọkụ a na-enye ọbụna, ikpo ọkụ ọkụ. Ihe a na-eji emepụta ihe, a na-emezi ebe a na-ekpo ọkụ ma na-atụ aro ka e tinye ya na ebe ndị iko 1. Mpempe akwụkwọ carbon carbon, nke nwere ụzarị ọkụ ọkụ na-acha ọkụ. 2. Ezigbo...
Obere Ngwongwo Ntanye Maka anu ulo na UL
Obere Ngwongwo Ntanye Maka anu ulo na UL Nkọwapụta ngwaahịa A na-eme ka anụ ụlọ anyị na-ekpo ọkụ site na iji nkà na ụzụ arụ ọrụ dị elu. Kama ụbụrụ ọkụ na-ekpo ọkụ nke nwere ike ịkpata ọnyá na-emerụ ahụ [radiation magnetics], ikpochapu ọkụ, nkwụsịtụ ngwa ngwa na ike nke nnukwu ike, ngwa ngwa anụ ọkụkụ na-ekpuchi PTC...
obere sauna ụlọ kpo ọkụ
obere sauna ụlọ kpo ọkụ Nkọwapụta Voltage ọsọ ọsọ: AC220V Nguzogide mbụ: 512-566Ω, nkwụsi ike 538Ω Ike: 90W ± 5% akwa mgbaaka na-eguzogide: 3750V5mA 5s Mgbochi nhichapụ: ≥100MΩ500Vdc Mmetụta nke iwepu ike: ≥5Kgf / 1min (Newton) Mwube na-eme: 1. Size: T0.75 * 300 * 400mm ± 1.5m 2. Ga-enwe mmetụta PTC, mgbe ike...
Igwe ikpo ọkụ ụlọ obere anụ
Igwe ikpo ọkụ nke anụ ụlọ bụ maka inye okpomọkụ na anụ ụlọ gị. Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 200 * 300mm, ahaziri dị elekere: 16w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba: nwa, ahaziri oge ndu: ụbọchị 30 Nkọwapụta ngwaahịa Ngwá ọkụ anyị na-emepụta ihe bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mma...
Ụlọ obere ụlọ nwere ihe ọkụ ọkụ
Ụlọ obere ụlọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ maka inye okpomọkụ na anụ ụlọ gị. Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 200 * 300mm, ahaziri dị elekere: 16w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba: nwa, ahaziri oge ndu: ụbọchị 30 Nkọwapụta ngwaahịa Ngwá ọkụ anyị na-emepụta ihe bụ otu n'ime ọrụ ndị...
Ngwongwo infrared obere pọọsụ na-ekpo ọkụ
Ngwongwo infrared obere pọọsụ na-ekpo ọkụ F035D N'okpuru Ulo Igwe Ulo Okpomọkụ UL Ndị E Dere Ihe
Ngwongwo ndị na-ekpo ọkụ na Amphibians n'okpuru tankị tankị obere anụmanụ
Ngwá Agha Amphibianss Na-ekpochapu Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ụmụaka Ụmụaka F034D N'okpuru Ulo Igwe Ugboro Igwe UL Ejiri Echetara Ihe
Egwuregwu Igwe Ụlọ Ọkụ na-eme Defogger na EC
Min. Nhazi: 500 Square Meter
Egwuregwu Ụlọ Igwe Ụlọ Igwe na-eme Defogger na CE, UL akwụkwọ Mgbe ị na-esi n'ime ụlọ ịsa ahụ pụta mgbe ịsa ahụ, mirror ime ụlọ na-ejupụta n'ọdụ ụgbọ mmiri, anyị na-enye ụzọ mgbapụ ọhụrụ nke igwe eletriki eletrik na-acha ọkụ eletrik, igwe nnụnụ na-ekpo ọkụ n'enweghị ihe mgbochi, mirror fog mirror na-egbu...
Ihe ngbochi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ maka ntanye ime ụlọ
Nkọwapụta ngwaahịa Nke a na -ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ịmalite na-eme bathrom. Site n 'ugbua ihe omimi kpochapu ihe omuma ya, o na-ekpo onyo anya ngwa ngwa ma kpochapu uzuoku na ala ala. Ihe nkiri anyị na- ekpo ọkụ na-ebipụtakwa radiation radrafụ nke dị mma nke dịkwa mma n'ahụ ahụ anyị. Ọ...
Ụzọ Ọhụụ Ọhụrụ maka Nlekọta Ugbo Ọkụ
Ụzọ Ọhụụ Ọhụrụ maka Nlekọta Ugbo Ọkụ N'adịghị ka waya ikuku oku na-ekpo ọkụ maka ala ọkụ, anyị ga-achọ ịmepe akwụkwọ ndụ anyị na ụzọ dị mma nke kpochapị ihe nkiri maka ikpo ọkụ. Ngwongwo ala anyi na-ekpochapu nwere ihe omimi kpo oku. Ngwá ọkụ ọkụ eletrik anyị dị mma maka ezigbo mmanụ ma ọ bụ mmepe nwere ike iji...
Obere Ntanye Zoo Ọkụ Ọkụ Ịgba Ọkụ Ọkụ Enwere ike ọkụ ọkụ Ozugbo ọkụ ọkụ Okwute Okpomọkụ Ọkụ Obere Okpomọkụ Ọkụ Maka Ihe Nti Onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Mmiri Na-ekpo ọkụ Na-ekpo ọkụ